Ye-Mon's Personal Pages: Loikaw (or) Second Switzerland
Labels: autobio, burmese, general, myanmar, travel
ကျွန်တော်လည်း တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ နေရတာကို နှစ်သက်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်မန်းလေးမှာ ရှိတုန်းကဆိုရင် မေမြို့ကို ခဏခဏ ရောက်တယ်။ တောင်ပေါ်မြို့ရောက်သွားရင် ဘယ်လိုမှန်းတော့ မသိဘူး။ စိတ်ခံစားမှုပါ ပြောင်းသွားတယ်။ လွိုင်ကော်ကိုတော့ မရောက်ဖူးသေးဘူးဗျာ။ ရောက်အောင်တော့ သွားအုံးမယ်။
I like May-Myo too. It seems that we share similar feelings. I am sorry to say that comments in Burmese does not work very well. I am yet to findaway to fix it. Anyway, thanks for your comment. Drop by to my blog if you feel like to.
ကိုရဲမွန်ရေ...ကယားပြည်နယ်အကြောင်း ထပ်ရေးပါဦး...ဒီလိုဖတ်ရတာ အလွမ်းပြေတယ်...